I-Jojo's Bizarre Adventure: All-Star Battle R Imenyezelwe Ngokusemthethweni ku-PC - Ukudlala
I-JoJo's Bizarre Adventure: Idethi yokukhishwa kwe-All Star Battle R kanye Nosekelo Lwenkundla
Uyafuna ukuthola okuhlangenwe nakho okungokoqobo kwe-JoJo ngangokunokwenzeka kuyilapho uthatha uhlu olukhulu lwabalingiswa njengoba belungiselela ukuhlangana endaweni eyodwa? Izinguqulo ze-PC kanye ne-console ye-JoJo's Bizarre Adventure: All Star War R imenyezelwe.
I-JoJo's Bizarre Adventure: All Star Battle R, umdlalo wokulwa osuselwe ku-anime onenqwaba yabalingisi abangalibaleki, uzokhishwa ku-Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, kanye ne-PC, ngokwesimemezelo sanamuhla. Kuhlelelwe ukuthi ifike ekwindla ka-2022.
I-Bizarre Adventure ka-JoJo: I-All Star Battle R, ethuthukiswa yi-CyberConnect2 Co., izocwilisa abadlali enguqulweni yangempela yomdlalo wevidiyo ehlala ithembekile kusitayela sobuciko esibandakanyayo somdali u-Hirohiko Araki futhi ifaka uchungechunge lwe-anime 'yabalingiswa bezwi base-Japanese bokuqala.
I-JoJo's Bizarre Adventure, eyaqala ukukhonjiswa ngo-1987 futhi yaguqulwa yaba uchungechunge lwe-anime ngo-2012, yaziwa kakhulu ngamaqhawe ayo anemibala, asebenzisa amagama ashubile kanye nokushukuma komzimba okuphezulu ukuze ashayane ngenkathi kusetshenziswa ubuciko bempi namandla angaphezu kwawemvelo.
I-Bizarre Adventure ka-JoJo: I-All Star Battle R iwumdlalo onesifiso esikhulu emlandweni we-franchise, ehlanganisa ndawonye abalingisi abangaphezu kuka-50 abavela kulo lonke uchungechunge lwezindaba ezinhlanu.
Phakathi kwabalingisi abaningi abatholakalayo abangadlalwa kukhona u-Jonathan Joestar, DIO, Jotaro Kujo, Jolyne Cujoh, indodakazi kaJotaro kanye noJoJo wesifazane ongowokuqala ngqa ochungechungeni, nabanye abaningi.
Abadlali bazokwazi ukuzwa izimpi ezidumile endabeni ngayinye futhi babone amaqhawe avela emazweni ahlukene ehlanganyela okokuqala ngqa.
'I-franchise ye-JoJo's Bizarre Adventure ibilokhu idlondlobala eminyakeni edlule, futhi siyajabula ukukwazi ukukhipha umdlalo ozovumela abalandeli besikhathi eside nabasanda kufika ukuthi babe nempi ejabulisayo nabalingisi babo abayintandokazi,' kusho u-Herve Hoerdt. , Iphini Likamongameli Omkhulu Wedijithali, Ukumaketha, Nokuqukethwe e-BANDAI NAMCO Europe SAS
I-JoJo's Bizarre Adventure: I-All Star Battle R ihlanganisa uhlu olukhulu kunawo wonke labalingisi kugeyimu ye-JoJo, enezinhlamvu ezingu-50 abadlali abazokwazi ukudala imidlalo yamaphupho abo, kanye nezici ezintsha ezifana nesistimu yempi yeqembu le-Support Attack, kanye nengcebo yemodi yegeyimu nokuqukethwe okwenza umdlalo ufinyeleleke futhi ujabulise abadlali bawo wonke amazinga wamakhono.
Inguqulo eklanywe kabusha ngokuphelele futhi ethuthukisiwe yesistimu yokulwa eyavezwa ngaphambilini ngo-2013 ikhishwe ku-JoJo's Bizarre Adventure: All Star Battle R, ikhulisa i-tempo ngezitobhi ezishayayo, amadeshi, izinhlanganisela ezintsha eziyinkimbinkimbi, kanye nohlelo olusha lwempi lweqembu lomaka olwaziwayo. njenge-Support Attack.
Kukhona izindlela zegeyimu ezimbalwa ongakhetha kuzo, okuhlanganisa i-All-Star Battle Mode, i-Arcade Mode, i-Online Mode, i-Versus Mode, i-Practice Mode, i-Gallery Mode, nokuningi.
Imodi eyinhloko, i-All-Star Battle Mode, ihlanganisa ukungqubuzana kwakudala phakathi kwabalingisi bemidlalo edlule kanye nokungqubuzana okusha, okuhlinzeka abadlali ngezimpi ezihlukene ezingaphezu kuka-100 abangakhetha kuzo.
Kanye nezikhumba ezehlukene ezenziwe ngokwezifiso neziqoqekayo, I-JoJo's Bizarre Adventure: All Star Battle R ihlanganisa izinhlobonhlobo zemisebenzi yobuciko ehlukile abadlali abangayivula futhi bayisebenzise Kumodi Yegalari.
Yilokho Konke Mayelana Ne-JoJo's Bizarre Adventure: All Star Battle R. Hlala ubukele ukuze uthole izibuyekezo eziningi futhi ubeke uphawu kusayithi lethu ukuze uthole izindaba ezengeziwe. Ngiyabonga Ngokufunda!
Asikwazi Ukulinda Ukubhekana Nalezi Zinselele Ezinhlanu Zomhlaba Wangempela ku-F1 Manager 2022
I-Racing Circuit Superstars Enendawo Enhle Manje Isiyatholakala ku-Playstation 4.
Dlala i-Super Catboy, igeyimu ye-Action Platformer Esheshayo futhi Egcwele Izimanga!